Waa maxay sababta keentay xil ka qaadis Taliye-xigeenka Xoogga Dalka - Awdinle Online
Waa maxay sababta keentay xil ka qaadis Taliye-xigeenka Xoogga Dalka
February 20, 2020(Awdinle Online) – Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu maanta xil ka qaadis ku sameeyay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Maxamed Cali Bariise.
Xil ka qaadistan oo dhaqan galaysa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 20-ka Febraayo 2020 ayaa timid kad dib markii uu Madaxweynuhu uu dhageystey talo soo jeedinta Ra’iisul Wasaaraha iyo la-taliyihiisa dhinaca arimaha amniga.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 10-kii October 2019 waxa uu darajada Sareeye Guuto u dalacsiiyey Maxamed Cali Bariise, xilligaasi oo sidoo kalena uu u magacaabay Taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka.
Jeneraal Bariise ayaa ah wiil dhalinyaro ah oo aqoobtiisa ciidan ay wanaagsan tahay sida ay sheegeen badankood saraakiisa ciidanka xoogga dalka.
Warar kale ayaa sheegey in Jeneraal ay isku dhaceen Ra’iisul Wasaaraha iyo labo gabdhood oo kala ah ku-simaha agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga iyo xoghaynta Ra’iisul wasaaraha, kuwaasoo ay isku maan dhaafeen nidaamka maamulka ciidan xoogga dalka
Previous articleWasiir Cawad oo Magacaabey Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda
Next articleAkhriso Warqadda Iscasilaadda Jeneraal Bariise oo labo Maalin ka hor aheyd